Misy raha Vakiniadiana
Accueil » Chronique » Misy raha Vakiniadiana
Ambatomanga, vohitra miavaka ao Vakinia­diana, atsinanan’Antananarivo. Mbola any ambadik’Ambohimalaza, ambadik’Imerinka­- sinina, Ambadik’Anjeva. Raha mitady «Trano Gasy» maro miangana, miorina an-tampom-bohitra fa tsy mitonantonana anaty tanimbary, dia rosoy ny dia mankany.
Saingy, omany ny saina. Mandra-pahatonga any, hahita ala-kininina tapatapaka. Tehezam-bohitra maro sola tanteraka. Antananarivo, hono taloha no tsara trano, Vakiniadiana no sola vantotra. Ankehitriny, Antananarivo no tsara soronafo sy mafana fatana, ny alan’i Vakiniadiana sy Amoronkay no ripaka lasa arina fandrehitra.
Tamin’ny faha-Mpanjaka, teo Ambatomanga no niato ny dian’ireo Vahiny te hiakatra Antananarivo. Teo ny Misionera, ny Iraka avy any Andafy, ny mpivarotra, no niandry ny tenin’ Andriana manome azy alalana hanohy (na tsia) ny dia.
Efa roanjato taona lasa no gaga ny Vazaha tafakatr’ Imerina noho ny tampon-tanety sy havoana taka-maso tsy nisy tamingan’ala. Ny taona 1910-1920 no nambolena marobe ny eucalyptus robusta, izay hazo avy any Aostralia. Ny ala-atsinanan’ny Bezanozano aza moa zary ohabolana sisa, saingy azoko an-tsaina ny eritreritr’izay vahiny mpizahatany raha mahita izao fandripahana ala izao. Mampiteny ny moana ka ahoana moa no tsy hiloabava.
Andro alarobia, nahatonga ny anarana «Alarobian’ Ambatomanga» : raha mahafinaritra ny mahita fiara maro mitatitra ny vokatry ny tany, mahakivy tanteraka kosa ny fahasimban’ny tontolo. Ankoatra ny ala lasa arina, ny loharano ho ritra, amin’iny lalana AmbohimalazaAnjeva iny, vakivakian’ny olona avokoa ny vatolampy. Tsy manamorona ny arabe ihany, fa hatreny an-tampontendrombohitra. Sanatria, indray andro any, raha avela hanampatra izay danin’ny kibony ireo, ho montsaniny ho «moellons» sy «gravillons» avokoa ny vatolampin’ Angavo. Dia izay indray vao samy mody taitra, tezitra, malahelo.
Misy raha Vakiniadiana(Express) | AEMW dit :
Droit d’accès à l’information – Échanges entre les parties prenantes
Loi de finances – Mesures d’allègement fiscales et douanières maintenues